အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: တရားဝင် ကြေငြာသောသတင်း (ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလို့ကြေငြာခြင်း...)
တရားဝင် ကြေငြာသောသတင်း (ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလို့ကြေငြာခြင်း...)
"၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် များအား
အမေရိကန်ခရီးအတွက် Father Land ကုမ္ပဏီမှ
ငွေကျပ် သိန်း (၅၀) ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ "
ဟို ဘဘတွေကို ..
Father Land တို့
Naing Group တို့ ၊
-ဘယ်ပါမစ်တွေအတွက် ဘယ်နှစ်ထောင် ?
-ဘယ်မြေတွေမှာနေရာဦးထားချင်လို့ ချပေးခဘယ်နှစ်ထောင် ?
-အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခွင့်တွေမြန်ဖို့ ဘယ်နှစ်ထောင် ?
-တင်ဒါလေး ရဖို့ ဘယ်နှစ်ထောင်.?
-မယ်မယ့်အတွက် ဘယ်နှစ်ထောင် ?
-တားတားအတွက် ဘယ်နှစ်ထောင် ?
-မီးမီးအတွက် ဘယ်နှစ်ထောင် ?
-အလကားနေရင် ကန်တော့တာ ဘယ်နှစ်ထောင် ?
-အပျင်းပြေ၀ယ်ပေးတာ ဘယ်နှစ်ထောင်ဖိုး ?